That's so good, right?: ကိုကြီးပြောမယ် ညီလေးနားထောင် (အပိုင်း လေး)
လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းထားတယ်ပဲပြောပြော သဘာဝက အလိုလိုလုပ်ဆောင်ထားတယ်ပြောပြော အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ဟာ အမျိုးသားလိင်တံကို လက်ခံတဲ့ လက်ခံခွက်ဖြစ်ပြီး ထိုးသွင်းဆက်ဆံရာမှာ သာယာမှုရှိဖို့ အလိုလိုဖြစ်တည်ပြီးသားလို့ ကျွန်တော်ပြော ရင် ငြင်းဆန်ကြမလားမသိ။ ကျွန်တော်တို့လို လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူအမျိုးသားအများစုအတွက်ကတော့ စအိုဝကိုသုံးပြီး လိင် ဆက်ဆံခြင်းဟာ အလားတူ အဆုံးစွန်သာယာမှုစီ ဦးတည်ကြတဲ့အပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ အလေ့အကျင့်ရှိနေသူများအတွက် သာသာယာယာဖြစ်တည်စပြုနိုင်ပေမဲ့ အခုမှစတင် အသုံးပြုဆက်ဆံမယ့်သူများအတွက်ကတော့ တကယ့်ငရဲပါပဲနော်။
တချို့တွေကပြောကြပါတယ် ပုဒ်မ ၃၇၇ အရ ဘဘာဝမကျတဲ့လိင်ဆက်ဆံနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တဲ့။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆို ကိုယ့်လင်ယောက်ျားက ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးဆက်ဆံရင် ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားရင်တောင် လင်မယားကွဲဖို့တရားရုံးမှာဦးတိုက် လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သဘာဝကျတယ်ပြောပြော မကျဘူးပဲဆိုဆို ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ အသုံးပြုနေဆဲ အသုံးပြုကြမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်နေပါရဲ့။
သတိထားစရာတွေကလည်း ရှိနေနှင့်ပါတယ်။ အကြမ်းပတမ်းထိုးသွင်းဆက်ဆံရင် ပွန်းပဲ့သွေးထွက်နိုင်တယ်၊ ပါတနာတစ်ယောက် ယောက်မှာ ကာလသားရောဂါ၊ အေ့စ်ရောဂါတွေရှိနေရင် ကူးစက်ခံရဖို့လမ်းအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဖြေဆေးကလေးလို့ဆိုနိုင်မယ့်အရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ အလွှာခြားရင်ကမ္ဘာခြားတယ်လို့ ခံစားရသူများအတွက် ပါးလွှာသော ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားတွေ၊ ရေအခြေခံ ဆီအခြေခံ ချောဆီတွေ၊ လက်ခံသူအနေအထားနေသူများအတွက် ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲပါ…အဦးအစတုန်းက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ပါတနာတစ်ဦးတည်းထားပါ၊သွေးစစ်ပါ၊ပါတနာအများကြီးထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကွန်ဒုံးကိုသုံးပါဆိုတာကို ထပ်ပြောပါရစေ။
စအိုဝကိုအသုံးပြုပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်း (Anal Sex)
ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သတိမထား သိမနေဘဲ စအိုဝကိုသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် နာကျင်စေသော၊ မသက်မသာ၊ ပြီးတော့ ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော စိတ်ထိခိုက်မှုရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းတွေသာ တိုးလာနိုင်ပါတယ် (သွေးထွက်ခြင်း၊ စအိုစုတ်ပြဲခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့) ။ နောက်တစ်ခါ နှစ်ဦးစလုံး ကာလသားရောဂါများ (sexually transmitted infections -STI’s) ကူးစက်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများစီဦးတည်သွားခြင်း၊ ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲခြင်း တို့ကဲ့သို့ ကျန်မားရေးအတွက်မကောင်းသော ရလဒ်များ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံနည်းနည်းရှိသူဆိုရင်တော့ ဒီအပေါက်ထဲ ဘယ်လိုဖိသွင်းမယ် ဘယ်လိုအထုတ်အသွင်း အဆင်ပြေ အောင်ကြိုးစားမယ် ဆိုတာ သိကောင်းသိနေနိုင်ပါပြီ။
စအိုဝကိုသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုရာမှာ အပေါ်ကလူ(fucker) သို့မဟုတ် အောက်ကနေသောလူ(to be fucked)ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်တစ်ကြိမ်ကြိမ်က နာကျင်မှုတစ်ခုခု၊မနှစ်သက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခု ရရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွေရဲ့ ခံစားမှုအရှိန်ကိုမြှင့်ပြီး ဒီလိင်အင်္ဂါကိုသုံးပြီး ကျေနပ်မှုအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုရဖို့အတွက် လှေကားထစ်လေးတွေအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြလိုပါတယ်။
လျင်မြန်မှုအနှေးအမြန် ကိုထိန်းဖို့၊ စည်းချက်ဝါးချက်ကျခြင်း၊ ဘယ်လိုအနေအထား၊ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံအရ အချိန်သက်တမ်းကန့်သတ်ဖို့ဆိုတာတွေဟာ အောက်ကနေသောသူ(bottom) အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်လှေကားထစ်အဆင့် တစ်ခုပါ။ သင်ဒီလို စအိုကိုသုံးပြီးဆက်ဆံနေချိန် နာကျင်တဲ့ သို့မဟုတ် လုံးဝကိုမသက်မသာခံစားရတဲ့ ဖီလင်မျိုးရနေပြီဆိုရင် လုံးဝ ရပ်တန့်လိုက်ပါဗျာ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မဟုတ်တဲ့စွန့်စားမှုကိုသူရဲကောင်းမဆန်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်လေ ဒီကိစ္စမှာက။ သင့်ပါတနာ(top)ကတော့ သာယာနေနိုင်တယ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေနိုင်သော်ငြားလည်း သင့်ဘက်က တကယ့်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီဆို ပါတော့ သူစိတ်မပျက်စေမယ့်နည်းလမ်းနဲ့ ငြင်းဆန်ရှင်းပြလိုက်ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သည် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုတစ်ခုကိုယ်စီရဖို့ကြိုးစားခဲ့ ကြခြင်းဆိုတာကို မမေ့ဖို့လိုတယ် သို့မဟုတ် နာကျင်မှုကြောင့် ပါတနာရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မဆုံးဖြတ်လိုက်မိဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ အရေးတယူပြောလိုက်ပါရစေ။
စအိုကိုသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံတဲ့အနေအထားပုံသဏ္ဌာန်တွေက တော်တော်များများကိုရှိပါတယ်။ ပုံဟန်တစ်မျိုးစီက ခြားနားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု နှင့် အတွေ့အကြုံတွေကိုလိုက်လို့ပေါ့နော်။ အချို့အနေအထားတွေက အများစုအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် အချို့ သောသူများအတွက်ကတော့ အဆင်မပြေပါဘူး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များအရလေ။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအနေအထားပုံဟန် က ကိုယ့်ကိုပိုမိုစွဲလန်းစေတယ် ပြီးတော့ ပိုပိုပြီးကြိုးစားဆက်ဆံလိုစိတ်ရှိစေတယ်ဆိုတာကို တွေးတောစိတ်ကူးမှန်းဆထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအနေအထား ဘယ်လိုပုံဟန်တွေနဲ့ပဲဆက်ဆံသည်ဖြစ်ပါစေ မေ့မထားသင့်တာက သင့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိဖို့လို တယ်ဆိုတာပါပဲလေ။
အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲလျောင်းပြီး ခပ်မတ်မတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပါတနာရဲ့ လိင်တံပေါ်ကို စအိုဝအားတဖြည်းဖြည်းဖိချကာ အသွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့ အနေအထားဟာ လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲု့ ဘော့ပ်(bottom) တစ်ယောက်အတွက် အစပျိုးဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထား ပုံဟန် တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ အထုတ်အသွင်း အမြန်နှုန်းကို ထိန်းလို့ရတယ်၊ နာကျင်မှုကို ခံစားရတဲ့အချိန် ရပ်တန့်လိုက် သို့မဟုတ် လိင်တံ ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာတွေကို လွယ်ကူစေမယ်လေ။ အေးအေးဆေးဆေး သက်သောင့်သက်သာ အထုတ်အသွင်းပြု ဆက်ဆံလို့ အဆင်ချောသွားပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အခြားသော သင်စိတ်ကူးထားတဲ့အနေအထားပုံသဏ္ဌာန်တွေစီပြောင်းလဲဆက်ဆံဖို့ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်ပါပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူရှေ့ဝယ်ခပ်ကုန်းကုန်းလေးနေမယ် (Doggy Style)ဘော့ပ်တစ်ယောက်က မတ်တပ်ရပ်နေလျက်/ ဒူးထောက်လျက်/ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားမှာ နောက်ဘက်ကနေ တော့ပ်ပါတနာအနေ နဲ့အဆင်ပြေပြေထိုးသွင်းဆက်ဆံလို့ရတဲ့ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး အခြေခံကျတဲ့ပုံသဏ္ဌာန်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး မတ်တပ်ရပ်အနေအထားနှင့် အဆုံးမဲ့ဇာတ်လမ်းထွင်လို့ရသလို တစ်ခါတလေ ဘောပ့်က ကုတင်စောင်းသို့မဟုတ် စားပွဲစောင်းတစ်ခု ပေါ်ကိုလက်ထောက် ခြေတစ်ဖက်ကို ခုံတစ်ခုပေါ်တင်ပြီးရပ်တဲ့အနေအထား သို့မဟုတ် အလားတူအနေအထားတွေနှင့်ဆက်ဆံလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ‘Flat Doggy’ ကတော့အတော်များများရင်းနှီးနေတဲ့ လေးဘက်ထောက်အနေအထားမှာ ရင်အုပ်ပိုင်းကိုကြမ်းပြင်ပေါ်နှိမ့်ချ ပြီးနေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာ သို့မဟုတ် ဘော့ပ်က မှောက်ခုံအိပ်လျက်အနေအထားမှာ တော့ပ်ပါတနာကအနောက်ဘက်ကနေ ထပ်လျက်မှောက်သောအနေအထားနှင့်ထိုးသွင်းဆက်ဆံတာကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ဘေးချင်ယှဉ်လှဲချစ်ပွဲဝင်မယ် (Side by Side)
‘Flat Doggy’ နဲ့အနေအထားသိပ်မကွဲတဲ့ပုံစံအနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအပြောအရဆိုရင် ခိုးစားတဲ့ပုံစံ တဲ့လေ။ ဘာကြောင့်ဆို ဘေးစောင်းယှဉ်လှဲအိပ်နေတဲ့အနေအထားမှာ တော့ပ်ကနောက်ကနေ အသာအယာထိုးသွင်းပြီးခပ်ငြိမ့်ငြိမ့် ဆက်ဆံလို့ ရနေတာကိုးနော်။ ပုစွန်ကွေးလား 99 အနေအထားလားမသိပြောရရင်တော့။
မောင်ထမ်းပါ့မယ် ချစ်ရယ် (Knees on Chest/Ankles over Shoulders)
ဘော့ပ်ဖြစ်သူက အိပ်ယာပေါ်မှာပက်လက်ကျောခင်းအိပ်ကာ သူ့ခြေထောက်တွေကို ရင်ဘတ်နားထိကွေးတင်ထားတဲ့ သို့မဟုတ် သူ့ခြေထောက်တွေကို တော့ပ်ပါတနာရဲ့ ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ခိုင်းထားတဲ့အနေအထားဖြင့်ထိုးသွင်းဆက်ဆံသော အနေအထားပုံစံ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခုတင်စောင်းမှာ ဘော့ပ်ဖြစ်သူကိုလှဲလှောင်းခိုင်း ခါးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးခု ခြေတံတွေကို တော့်ပါတနာက ထပ်းပိုးတဲ့ အနေအထား သို့မဟုတ် ဆိုဖာခုံရှည်လက်ရန်းပေါ်ကိုတင်ပါးတွေကိုတင်ပြီး ကျောခင်းအိပ် ခြေထောက်တွေကို ခပ်ကားကားလုပ်ထား စေပြီး တော့ပ်ပါတနာက ခြေထောက်တွေကြားဝင်ရပ်က ထိုးသွင်းဆက်ဆံတဲ့အနေအထားတွေက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေနေပြီဆိုရင် တော်တော် အားရအောင်အဆင်ပြေစေတဲ့အနေအထားများဖြစ်ပါတယ်။
သိတယ်တတ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စအိုဝကိုသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံရာမှာအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့နှင့် အန္တရာယ်မရှိစေဖို့ အရိပ် အမြွက်အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
Anal sex hints & tips
- ကွန်ဒုံးများနှင့် ရေအခြေခံချောဆီ(water base lube) များကို ခပ်ပေါပေါသုံးကာ အလျင်စလိုမဟုတ်တဲ့ ငြင်ငြင်သာသာ အစ ပျိုးဆက်ဆံပါ။ နာမယ် အဆင်သိပ်မပြေလောက်သေးဘူးထင်ရင် ချောဆီကိုထပ်ထည့်အသုံးပြုပါ။
- ကိုယ့်ဖာသာလည်း လတ်တလောပြုလုပ်နေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပေါ် အာရုံဝင်စားလာအောင် မာန်ပါလာအောင်နှိုးဆွပေးပါ။ ခပ်ဖြေးဖြေးလေး၊ rimming လုပ်ကြည့်တာ၊ လက်ခလယ်နှင့် အသာထိုးသွင်းကြည့်တာ(ချောဆီရွှဲရွှဲဆွတ်လို့)မျိုးတွေနှင့် အစ ပျိုးရမှာပေါ့လေနော်။ ထိုးသွင်းဆက်ဆံတာကို လက်ခံဖို့အသင့်မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ တော့ပ်ပါတနာရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အလော သုံးဆယ်လိုက်လျောတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်တော့မလုပ်သင့်ဘူးဗျ။
- ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ တော့ပ်ပါတနာက အရမ်းချောလို့၊ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဖို့ဆိုရင် တွေ့ကြုံခဲတဲ့လူမို့၊သူ့အရှိန်အ၀ါကြောင့် ငြင်းဆန်ရန်ခက်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်များနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးဖို့ကိုမေ့လျော့ပစ်တာမျိုး မလုပ်ရပါ ဘူး။ ကိုယ်သိပ်မသိသေးတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ နေရာဒေသအစိမ်းသက်သက်မှာ အကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာက မိမိကိုယ်မိမိ စွန့်စွားလွန်းရာကျပါရဲ့။
- ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲသွားလား? အရမ်းမထိတ်လန့်ပါနဲ့။ လိင်ဆက်ဆံနေခြင်းကိုရပ်၊ အိမ်သာကိုသွားကာ သုက်ရည်တွေကို ညှစ် ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ သို့မဟုတ် တန်းလန်းဖြစ်နေဆဲ ကွန်ဒုံးကိုအသာဆွဲထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။
- နှစ်ဦးသားစိတ်ထဲ HIV ကူးခံရမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်မိနေတယ်ဆိုရင် PEP လို့ခေါ်တဲ့ treatment တစ်မျိုးကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် ရယူဖို့ကြိုးစားကြရပါမယ်။ (72 နာရီအတွင်း မြန်နိုင်သမျှ) PEP ကို လိင်ကျန်းမာရေးဆေးကုခန်းများ သို့မဟုတ် ဆေးရုံကြီးရဲ့ အရေးပေါ်ဌာနတွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
- ကွန်ဒုံးကိုသုံးတဲ့အခါ : ကွန်ဒုံးရဲ့ ရက်လွန်ဒိတ်ကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ပါ။ ကွန်ဒုံးအိတ်ငယ်လေးကိုဖောက်တဲ့အခါ လက်သည်းနဲ့ငြိ တာ၊လက်စွပ်နဲ့ချိတ်တာတွေဖြစ်နိုင်လို့ သတိထားဖောက်ပါ။ စွပ်ရမယ့်ဘက်အမှန်ကို လိင်တံထိပ်ဖူးမှာ အသာဖိပြီးလိင်တံ အရင်းထိဖြေချလိုက်ပါ။ ရေအခြေခံချောဆီ (water-base lube)ကိုသာသုံးပါ( Vaseline ကဲ့သို့ ဆီအချောခံချောဆီ -Oil base Lube)များကိုသုံးရင် ကွန်ဒုံးကို အလွယ် တကူပေါက်ပြဲစေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်)။ လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါ လိင်တံမပျော့သွားမီ လိင်တံအရင်းပိုင်းကနေ အသာဖိပြီးဆွဲချွတ်လိုက်ကာ အမှိုက်ပုံးထဲကိုစနစ်တကျထည့်ပါ။ အိမ်သာရေကမုတ်ထဲကို မစွန့်ပစ် ပါနဲ့။ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးနှစ်ခုကိုထပ်ပြီး အသုံးပြုဆက်ဆံတာကိုလည်း ရှောင်ကြဉ် ရပါမယ်။ ပိုမိုစိတ်မချရတဲ့အပြင် ပိုပိုပြီး ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲတာကိုလွယ်ကူစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Alex Aung (6 Nov 2012)
Sex Position Guide: http://thegaysexguide.com/anal-sex-positions